China painiapulu Fabric akpa mmetọ Free Natural ịchọ mma etemeete Bag Packaging maka Unisex maka Travel factory na suppliers | Changlin
Nchịkọta Production: JF20-22
Ihe onwunwe: painiapulu linen Arọ: 76g
Nha: L16 * W5 * H14cm Mmechi: zipa
Ebe Mmalite: GUA, CN Port: ShenZhen 、 Guangzhou 、 HongKong
Ngwa: ịchọ mma, mposi, ezinụlọ, njem azụmahịa
Advantage: eke, recyclable, inogide, eco-enyi na enyi, mmetọ free
Akwukwo painiapulu, akwukwo akwukwo achicha, nke a na-akpo dika fiber painia, bu eriri nke amuputara na akwukwo painiapulu, nke di na vein fiber, nke enwere ike weputa ya site na usoro ogwu, ndu na usoro. Eriri amịpụtara site n'ibu usoro bụ ezi mma na eke na-enweghị mmetọ. Egosiputala na heap painiapulu nwere ihe na-akpata nje na nje bacteriostatic, nke n’enwe ike igbu nje ma gbochie ogwu na ero. Ọ bụ ụdị nke ezigbo eke nlekọta ahụ ike na-elekọta akwa ihe pụrụ iche pụrụ iche-ezi pore Ọdịdị n'ime eriri Ọdịdị na ezi ikike banye na ikusi mmiri ngwa ngwa.
Ngwunye painiapulu bụ ihe okike, nke na-adịgide adịgide, nke na-enweghị obi ọjọọ. A na-eme ya site na epupụta ahihia nke osisi akwụna. Akwụkwọ ndị a bụ ngwaahịa sitere na owuwe ihe ubi painiapị dị ugbu a, yabụ akụrụngwa achọghị ihe ndị ọzọ metụtara gburugburu ebe obibi iji mepụta.
Akwukwo painiapulu akwukwo, nke nke ahihia akwukwo ahihia, bu ihe eji emeputa ya na akwukwo painiapulu. Enwere ike ịgwakọta ya na eriri eke ma ọ bụ eriri sịntetik. Mbipụta dị mfe na agba, ume ume, enweghị mfe nhịahụ, mma, eco-friendly.
eke ihe, siri ọma aka
Neat kpachie, obere stitches, ọ dịghị eri breakage
Nke gara aga: Eco-friendly linen Cotton bag ịchọ mma obere akpa Travel Guzosie Up obere akpa Private Label Makeup Bag
Osote: Nkume okike eji eji ngwugwu ihe eji eme ihe maka Unisex maka njem
Natural Fabric reusable ịchọ mma ntecha akpa pac ...